यो हप्ता कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको ४२औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भयो । पुष्पलालसँग सम्बन्धित धेरै वटा फोटोहरु हेर्ने मौका मिल्यो । विशेषगरी विभिन्न समयका उहाँका फोटोहरु पोष्ट भएको देखियो, जसबाट केही इतिहास र त्यससँग जोडिएका तथ्यहरुबारे जानकारी मिल्यो । कसै कसैले ‘कुन बाटो ? मूल बाटो’ भनेर पनि पोष्ट गरे । यो बुझेर हो या व्यंगात्मक हो भन्ने बारेमा बुझ्न गाह्रो भयो । किनकि, कुन बाटो ? भन्ने पुस्तक पुष्पलालले लेख्नुभएको थियो भने, ‘मूल बाटो’ तुल्सीलाल अमात्यले लेख्नुभएको थियो । त्यो बेला ती दुई नेताहरुबीच विचारधारात्मक संघर्ष चलिरहेको थियो ।
पुष्पलालले नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट अलग भएर कम्युनिष्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद विसं २००५ मा गर्नु भयो । भूमिकामा उहाँले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता छ भनेर लेख्नुभयो र विसं २००६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । उहाँले स्थापना गर्नुभएको पार्टीको निरन्तरताको रुपमा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफूलाई मान्दै आएका छन् ।
आजको समयमा पुष्पलालको बारेमा चर्चा गर्दा हामी के भन्न सक्छौं भने पुष्पलाल एक विचारक हो । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्ने, संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने, साझा समस्याको विरुद्धमा जुझ्नको लागि मिल्न सक्ने संग मिलेर जाने भन्ने विचार विभिन्न समयमा राजनीतिक पार्टीहरुले पछिल्ला समयमा लागू गरेको र सफल भएको देखिन्छ । अहिलेको नेकपाले देशको आर्थिक समृद्धि र सुशासनतर्फ लैजाने जिम्मेवारी पाएको छ । नेकपाले सुझबुझका साथ पार्टीपंक्तिलाई एकजुट बनाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न पार्टी भित्र र बाहिरका मिल्न सक्ने जतिसंग मिलेर जानु पर्दछ । तब मात्र पुष्पलालप्रतिको सही श्रद्धा मानिने छ ।